रारा र चन्दन « Rara Pati
२०४६ सालको बहुदल घोषणापछि राजनीतिक पार्टीहरूको राजकाज सुरु भयो । प्रायः राजनीतिज्ञहरू आफ्नो सङ्घर्षको बदलामा राजसी सुखभोगमा लिप्त भए । सायद भागबन्डा नमिलेको हुनसक्छ, तर केही राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो लक्ष्य देश बनाउनु र जनताको जीवन स्तर उकास्नु हो भनेर बाउँटिए । तिनले दुर्गममा पसेर माओवादको नाममा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे । यो आन्दोलन सरकार र माओवादीबीच पूरै दश वर्ष चल्यो । यस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण पेलानमा परे । धेरैको ज्यान गयो । केही माओवादी र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू पनि सहिद भए । हजारौँ हराए । हजारौँ घाइते भए । अन्ततः सरकार र माओवादीबीच सम्झौंता भयो । त्यसपछि चुनाव । चुनावमा पूरै बहुमत प्राप्त नभए पनि अग्रपङ्तिमा आयो माओवादी । सानो पार्टीको साथ पाएर माओवादीले बनायो सरकार । जनयुद्धको मारमा परेका सर्वसाधारणले राहतको सास फेरे । जनयुद्धलाई साथ दिने निमुखा जनताहरूले दशैँ मनाए । माओवादीका घाइते लडाकुहरूको मनको पीडा उड्यो । तनको पीडाका लागि पनि आफ्नो सरकारबाट उचित राहतको आश्वासन पाए ।
माओवादी सेनाका घाइते चन्दनलाई गाउँलेहरूले ‘काठमाडौँ जाओ, आफ्नै सरकार छ इलाज गराओ !’ भनेर उचाल्न थाले । छरछिमेकको कुरा सुनेर श्रीमती राराले लाग्नेलाई काठमाडौँ ल्याई ।
काठमाडौँमा जनयुद्धका घाइतेहरूलाई विशेष सहुलियतबाट उपचार गरिने अस्पताल पनि रहेछ । सोध्दै खोज्दै राराले आफ्नो लाग्नेलाई त्यहीँ पुर्याई ।
दिनको एक बजे चन्दनको नाम अस्पतालमा दर्ता भयो । दुर्गमबाट ल्याइएको घाइते भनेर सम्बन्धित कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त काममा खटिए ।
“सहिदका सालिक र फोटाहरूमा ठुलाठुला आँखा बनाएर डाँडाडाँडामा, चौकचौकमा, अफिसअफिसमा, घरको भित्ताभित्तामा र भित्ते पात्रोहरूमा सजाउनु पर्छ । ती ठुला आँखाले देशको सु–सम्पन्नता हेर्दै जानेछन् र बाटो बिराउनेहरूलाई खबरदारी गराउँदै रहने छन् ! जनयुद्धका घाइते चन्दन ! नेपाल आमाका महान् सपूतहरूमध्ये एक हुन् । यिनको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ र कुनै कमि हुन दिइने छैन ! यिनले देशको समृद्धि आफ्नै आँखाले देख्न पाउन भन्ने हाम्रो अभीप्सा हो ! बिर चन्दन जिन्दावाद !” नारा लगाउँदै अप्रेसन रुममा छिराए ।
अहो…, ठाउँमा पो हुँदो रहेछ मान्छेको कदर ! कस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुगिएछ त ! मनमा लिएर रारा दङ्ग भई ।
“छिटो गर्नुस् ?” भन्ने स्वरले उसलाई झसङ्ग बनायो । हडबड गर्दै आफूसँग भएको एक लाख दिई । बाँकी दुई लाखका लागि घरमा फोन गरेर ससुरा पर्वत पहाडीलाई गुहारी ।
ठीक एघार बजे अस्पतालको खातामा आइपुग्यो दुई लाख । तब अप्रेसनको तयारी भयो । हतारहतार नर्स निस्की र राराको हातमा डाक्टरको आदेश पत्र (प्रेस्क्रिप्सन) पक्राई ।
भुइँ तलामा झर्ने बित्तिकै लाइनै लागेका देखिए औषधी पसल । रारा प्रेस्क्रिप्सन देखाउँदै तेस्रो पसलमा पुगेकी मात्रै के थिई पसलेले झ्याप्प कागज समायो । प्लाष्टिकको थैलो ठिक्क पारेको रहेछ छिटोछिटो औषधीका सिसी, इन्जेक्सन, रुइका बण्डल र ट्यावलेटका प्याकेट भर्न थाल्यो । अर्कोले पचास हजारको विल ठिक्क पारेको रहेछ । राराको हातमा राख्यो ।
“डाक्टरले लिने पैसा चिरफार गर्नलाई हो ! औषधीको पैसा त हामीलाई दिनुपर्छ ।” पसलेले औषधीको पोको आफूतर्फ तान्दै भन्यो, “औषधी किनेर दौडँदै आउनु भनेनन् ? अप्रेसन सुरु भइसक्यो होला ।”
भित्रबाट कस्तो खबर ल्याउँछन् भन्ने मनमा लागेर राराका हातखुट्टा सकसक्याइरहेका थिए । छेउमै स्टुल थियो, तर त्यसमा बस्न कसैले भनेनन्, रारालाई आफूखुसी बस्ने आँट आएन । उभिँदाउभिँदै थाकेपछि भुइँमै थेच्चिएकी थिई, निदाइछ । नर्स आएर घुँडाले हल्लाउँदै भनी, “तपाईं सुत्न आउनु भएको हो ? लल यो पर्चा समाएर औषधी पसलतिर दौडिहाल्नुस् त, अत्याधिक ब्लिडिङ हुन थाल्यो ।”
“बिरामीको चिन्ता हामीमाथि छोडदिनुस् दिदी !” नर्सको स्वर सानो हुँदै गयो । खुबै हतार छ जस्तो जवाफ दिँदै बाहिरिई, “होस् आयो भने खबर गर्छु… ।”
सपनाले झसङ्ग ब्युँझायो रारालाई । पसिनाले निर्थुक्कै भएकी थिई । वरपर हेरी । वेटिङ् रुममा तीन–चार जना अरू पनि सुतेका थिए । बाहिर अन्धकार देखिन्थ्यो । उसले मोबाइल निकाली र पुछपाछ बनाएर दृष्टि गाडी । उसको चित्त बुझेनछ । औँला जिब्रोमा लतारी र मोबाइलको स्क्रिनमा । अनि बाहुलामा घोटी र बिजुलीतिर ढल्काइढल्काई हेरी । रातीको बाह्र बजेको पो रहेछ ! मजेत्रोको छेउले पसिना पुछ्दै बाहिर निस्की । दुई जना नर्स कतै जाँदै थिए । रारा तिनसँगै सोध्न पुगी, “बहिनी ! मेरा श्रीमान्को अप्रेसन हुँदै थियो के भयो?”
“अहिले त अप्रेसन रुम बन्द छ दिदी ! अब भोली नै थाहा हुन्छ ।” नर्सहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिँडे ।
राराले भगवान्को नाम लिई र फेरि वेटिङ् रुमतिरै फर्किई । त्यहाँ उसको झोला थियो । झोलाबाट खास्टो निकाली घुम्चो हालेर बसी । उसका आँखामा केही बेर अगाडि देखेको सपना नाच्न थाल्यो– एक हुल सेतासेता पोसाकधारीहरूले उसलाई घेरेका थिए । कसैले बीन बजाइरहेका थिए त कसैले सहनाई ! कोही दमाहा बजाउँदै थिए त कोही भाँडाबर्तन ठटाउँदै थिए ! एक्कासी चन्दन निस्क्यो र “भाग रारा भाग ! यी जादुगरहरूको बाजा नसुन ! गाउँबाट बुबालाई बोलाऊ ।” चिच्याउन थाल्यो । ती जादुगरहरू चन्दनतिरै फर्के । उसलाई समाएर झ्याइँकुटी बनाउँदै कोठामा लिएर थुने । सपना सम्झँदा राराको जीउमा काँडा उठे ।
उज्यालो हुनासाथ रारा अप्रेसन रुमको खोजीमा निस्की । सेतो कोटमाथि स्टेथोस्कोप झुण्ड्याएको मान्छे देखीकि“डाक्टर साहेब ! मेरा श्रीमान्लाई कस्तो भयो ?” सोधिहाल्थी । कोही ठीक हुँदै छ भन्थे भने कोही थाहै नभएको अर्थमा टाउको हल्लाउँथे । सेतो कोट लगाएकी केटी देखेपछि “बहिनी ! अप्रेसन रुम कता छ ?” सोध्थी । सोध्दै खोज्दै अपे्रसन रुमत भेटाई, तर त्यसभित्र छिर्नै दिएनन् । ढिपी गर्दा चौकिदार आइपुग्यो । उसले वेटिङ् रुममै लगेर छोड्दियो ।
आधा घण्टापछि नर्स आई र भनी, “दिदी ! बन्दुकका छर्राहरू नशाको बीचबीचमा गएर बसेका छन् । एउटा तान्यो अर्को देखिन्छ, अर्को तान्यो अर्को देखिन्छ । डाक्टर साव हैरान भइसक्नुभयो । फेरि अर्को छर्रा देखियो । त्यसलाई पनि निकाल्नै पर्छ रे ! जानुस्, औषधी ल्याएर आउनुस् त … ।” उसले प्रेस्क्रिप्सन समाएको हात रारातिर बढाई ।
“यो त अपसगुन हो बुहारी ! जोगी भइदिया राम्रो हुँनो हो । अली बिचार अरेई है, ठगहरूको चङ्गुलमा पड्लेई !” पर्वत पहाडीले सम्झाउन खोजे, तर बुहारीलाई लोग्ने सिवाय केही चाहिँदैन भन्ने थाहा थियो उनलाई । बुहारीले मेरो लोग्ने नै नरहे म पनि बाँच्दिन । मलाई यो सम्पत्तिको के मोह ! मेरा भागमा जेजति पर्छ उपचारमै लगाउँछु भनेको सम्झेपछि उनको मुखमा बुझो लाग्यो । जमिन जायजाद साहु कहाँ धितो राख्ने र पैसा पठाउने निधो गरे ।
राराले औषधी लिएर नर्सलाई दिँदै भनी, “मेरा श्रीमानलाई देखाई दिनुस् ।”
नर्सले धैर्य राख्नुस् भनेपछि उसले डाक्टरलाई भेट्ने इच्छा जनाइ र ढोकामै धर्ना बसी । आधा घण्टामा डाक्टर आएर भने, “तपाईंको धैर्यबाहेक अरू सब ठिक छ ! भगवान्माथि विश्वास गर्नुन् न, हामीले लाग्दोपुग्दो गरिरहेकै छौँ ।”
त्यहीँ बस्ने बिरामी कुरावाले “दिदी ! यता आउनुस्त, एउटा कुरा भन्छु ।” रारालाई समाएर होटेलमा
लगी । अनि खाना मगाएर भनी, “चन्दनको मुख हेर्नु छ भने खाना खानुस् । उता चन्दन ठीक होला यता आफू पर्नुहोला थला ! के फाइदा ?”
चन्दनको नाममा राराले खाना खाई । खाएपछि जीउ झुम्म भयो । फेरि वेटिङ् रुममै गएर ढली । एकै चोटी राती ब्युँझिँदाको अनुभूति बिर्सि नसक्नुको थियो । उसले ससुरालाई सुनाउनै नसक्ने ठानी र कापी कलम खोजेर लेखी । अनि अप्रेसन रुमतर्फ जाँदै थिई चौकिदारले फर्काइदियो ।
बिहान ब्युँझेपछि रारा गएर त्यही अप्रेसन रुमको छेउमा उभिरही । डाक्टर र नर्सहरू अरू नै रोगीहरूको उपचारमा लागिरहे । रारातिर ध्यानै दिएनन् । उसले पनि आफ्नो लोग्नेको बारेमा कुनै जिक्री गरिन । केही बेरपछि नर्सले उसको हात समाएर वेटिङ् रुममै पुर्याइदिई ।
“दिदी ! तपाईं खाना खाएर बस्नुस् न । एक छिनपछि औषधी लिन दौडिनु पर्छ !” नर्सले भनी ।
रारा फरक्क फर्की र औषधी पसलमा पुगी । पसलेले प्रेस्क्रिप्सन पनि मागेन ! औषधीको पोको र बिल तयार थियो, पक्राइदियो । त्यो समाएर रारा लखरलखर अप्रेसन रुममा पुगी ।
“दिदी ! तपाईं त कस्तो समझदार भइसक्नु’ भ्यो !” नर्सले दाँत देखाउँदै औषधीको पोको समातेर भित्र पसी ।
समझदार नै भनिसकेपछि वेटिङ् रुममै गएर बस पनि किन भनिमाग्नु ! ऊ लखरलखर वेटिङ रुममा गएर बेग्लै प्रकारको समयको प्रतीक्षामा घोरिई । पाँच–सात मिनेटमा नर्स आई । यसो हेरेर गई । नयाँ समयको प्रतीक्षामै घोरिँदाघोरिँदै निदाइछ । जब ब्युँझी उसको जीउ पसिनाले भिजेको थियो । उसले कलम र कापी निकाली र सपना लेखी ।
किन किन आज केही भिन्दै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो रारालाई । अप्रेसन रुममा पुगेर फर्किंदा पनि उसको सास फुल्न थालेछ । आँखा अगाडि अँधेरा हुन थालेछ र रिँगाटा पनि लाग्न थाल्यो । कुमालेले चक्र घुमाएझैँ खै कुन शक्तिले घुमाइरहेको थियो दिन ! केही नयाँको प्रतीक्षा गर्दागर्दै आँखै अगाडि पर्यो रात, तर उसको मनले मानिरहेको थिएन । कमजोरी बढ्नु बाहेक नयाँ केही घटिरहेको थिएन । कुनै नयाँको प्रतीक्षामा निद्रा पनि परिरहेको थिएन । एकाएक अस्पतालमा कोकोहोलो भयो ! स्टाफहरू दौडधुप गर्न थाले । राराका इन्द्रियहरू सम्वेदनशील भए । ऊ कान थाप्दै बाहिर निस्की । अस्पतालको डाइरेक्टर र मुख्य डाक्टर लिफ्टमा अड्किए ! भनेको सुनी, तर रारालाई यो कुरा खासै ठुलो लागेन । उसको जाँगर फेरि सेलायो ।
“त्यही भूतकै खेल हो ! त्यसैको आतङ्कबाट बच्नका लागि अहिलेसम्म मिटिङ गर्दै थिए । अन्ततः भोलि बाहुन ल्याएर स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका हुन् । सररर… लिफ्टबाट तल झर्दै गर्दा झ्याप्प गइदियो बत्ती ! बिचैमा झुण्डिरहेको छ लिफ्ट । जेनेरेटर स्टार्ड भयो, तर लिफ्ट चलेन !”
“भूतको कुरा नगरन, मलाई डर लाग्छ !” कसैको खासखुस सुनियो ।
“म त झकाउने बित्तिकै पाइहाल्छु झापु !” चौकिदार अगाडि सर्यो । “कहिले सकिएला नाइट डिउटी भन्ने भइरहेको छ । घरमा बुढी बिमारी छ भनेर हिजो रातीको डिउटीमा साथीलाई बसालेँ । दुई–चार झापु उसले पनि भेटेछ ! आज पनि सहयोग गर्न भनेको त गाली पो दियो मलाई !”
“लिफ्टको मेकानिक आएर पनि खराबी कहीँ देख्दैन, तर लिफ्ट चल्दैन । सब ठीकै देखिन्छ त भन्दै तल र माथि कुदिरहेको छ !”
राराले सब सुनिरहेकी थिई । “ठिक्क प¥यौ !” मनमनै भनी ।
रारा अप्रेसन रुममा पुगी । कोठा बन्द थियो । फर्केर फेरि त्यही वेटिङ् रुममा आउँदा थकानले भुतुक्कै भई । त्यही थकानले उसलाई निद्रा देवीका जिम्मा लगाइदिएछ ! यस पटक ब्यँुझिँदा उसको अुनुहारमा पसिनाको साटो गम्भीरता थियो । आज पनि उसले खल्तीबाट त्यही कागज र कलम निकाली । टेबुलमा राखी र केही लेख्दालेख्दै कलमको टुप्पो भाँची । चिट्ठीलाई कपालको गुजुल्टो भित्र घुसारी र खिल्का छोडेर हाँस्न थाली ।
“किन चाहियो र ?” चौकिदारले मोबाइलमा हे¥यो, “रातीको १२ बज्यो ।”
रारा उठ्नलाई हात टेकी, तर सकिन । चौकिदारले समातेर उठायो । बिस्तारै हिँडालेर अप्रेसन रुममा लियो । गेटबाट भित्र छिर्दा राराले चौकिदारको मुखमा हेरी । “जाउँ जाउँ छिर्न पाइन्छ ! आज तपाईंलाई नै लिन आएको हुँ ।” चौकिदारले भित्र पसाल्यो ।
डाक्टरले भने, “म्याडम ! तपाईंका श्रीमान् चन्दनलाई छिनछिनमा उपचार गरिराख्नु पथ्र्यो । दुर्भाग्यवस आज डाक्टर साव चार–पाँच घण्टादेखि लिफ्टमा अट्कनु भएको छ । यता तपाईंका श्रीमान्ले छोड्दिनु भयो !” कपडा पल्टाएर मुख देखाए ।
उता लिफ्ट चलेछ । अरू पनि आए । चन्दन र राराको लास लिएर शवगृहको फ्रिजमा थन्काए ।
एकाबिहानै पर्वत पहाडीको मोबाइल बज्यो । बुहारीको फोन हो कि ? वृद्धले हात कमाउँदै मोबाइल समातेर दृष्टि गाडे । नम्बर चिनेनन् । रिसिब बटन थिचेर कानमा टाँसे र भने, “हलऊ… ।”
निकै बेरपछि वृद्ध बडबडाए,“चन्दन ! छोरा…, मैकन यत्तिकै छोडेर हिँडी ? छोरो ठीक होला तब सोधुँला भन्दाभन्दै एउटो कणो मनौनै रैगयो । अब म कैसँग गैकन सोधुँ ती आम जनताका को छिया ? जसको हक अधिकार र सुख सुविधाका लागि लड्याकोछु भन्नै छिइ ? जोले गाऔनो मृत्युको ताण्डव नचाया नचाया र आफू गैकन कुर्सीमा बस्या ! आम जनता ती हुन् ? कि बन्दुक बोकीकन गाऔनो पस्न्या र मन लाग्यो अन्र्या आम जनता हुन् ? काठमाण्डुका डाँक्डर हुन् कि ? जो चार लाख रुपियाँ ल्याइकन झट्टै छोराबुहारीको लास लैजाऊ भन्नाछन्, उपकार ग¥याका हुनन् भन्याजन ! बिचरी बुहारीले जीवनभरिको दुःख काठमाण्डुमा गैकन केही दिनमै बिताइ र लोग्नेको शोकमै सास छोडी ! आम जनता त्यो बुहारी हो कि ? कि म बुढो हुँ आम जनता ? छोरालाई उपचार गर्न काठमाण्डु लिन सक्यान र बुहारीलाई पठाएँ ! अब ती छोराबुहारीकै लास लिन जान सक्छु ? छोरा ! मर्नु नै छियो भन्या गाउँनै म¥या हुन्याछियो । सास जानीबेला काखौँनो राख्दा हौँ ! हिरन हाल्दा हौँ ! तेरी आमालाई सेलाएका ठाउँमा लिइकन दाहसंस्कार गर्दा हौँ । म बुढो कसरी आउँ काठमाण्डु ? छोराबुहारीको लास लिन !” वृद्धका नौनाडी गले । एउटा हातले मोबाइल समातेर कानमा टाँसेकै थिए । अर्को हात लिएर थाप्लोमा राखे । क्वाँक्वाँ रुन सकेका भए आँशुबाट बग्दो हो पीडा । उनको दुःख भक्कानाबाट पनि फुट्दो हो । वेदनाले कक्रिए ।
लखरलखर अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीहरू खुसामद गर्दै बिल खोज्न थाले । पैसा तिर्नुभन्दा पहिला पर्वत पहाडीले छोराबुहारीको लास हेर्ने इच्छा जनाए । ती सबैलाई शवगृहमा लगियो र चन्दनको लास देखाइयो । अर्को बक्स खोलेर राराको लास । बुहारीको शव देख्ने बित्तिकै उनको दृष्टि कपालको गुल्थोमा पुग्यो । बुहारीसँग अन्तिम पटक कुरा हुँदा बुबा ! अब तपाईंले काठमाडौँ आउनु पर्छ होला, हामी नभेटिए पनि मेरो कपालको गुल्थोमा एउटा चिठी भेट्नु हुनेछ, त्यसलाई पढेर मात्रै उचित कदम चाल्नु होला भनेकी थिई ।
ठिटाले कागज खोल्यो र चर्को स्वरमा पढ्न थाल्यो, “बुबा ! मेरो पहिलो दिनको सपना सुनेर तपाईंले ठिकै अटकल्नु भएको थियो, तर म एकोहोरिन विवस थिएँ । दोस्रो दिनदेखिको सपना र मेरो भुक्तमान तपाईंलाई सुनाउने आँटै आएन, लेखेरै राख्न थालेँ । त्यो यसप्रकार छ–
दोस्रो दिन, निदाउनै पाएकी थिएन मेरो पछ्यौरा स्वात्त तानियो । उठेँ । वरपर हेरेँ । बिजुली बत्ती बलेकै थियो । वेटिङ् रुममा तीन–चार जना अरू पनि सुतेकै थिए, तर मेरो मजेत्रो कसले तान्यो ? सोच्दासोच्दै निदाएँ । सपनामा तिनै सेता पोशाकधारी जादुगर र जादुगर्नीहरू आएर आ–आफ्ना हातमा भएको सहनाई, बीन, तबेला, चिम्टा, चम्चा बजाउन थाले । त्यो सुनेर म लट्ठिँदै गइरहेकी थिएँ । “भाग रारा भाग !!!” चिच्च्याउँदै मेरा श्रीमान् आउनुभयो । जादुगरहरू उहाँलाई नै समात्न गए । उहाँ हात जोडेर “हामीलाई छोड्देऊ ! हामीलाई छोड्देऊ !!!” बिन्ती बिसाउन थाल्नुभयो, तर निर्दयी जादुगरहरूले उहाँलाई नै झ्याइँकुटी पार्दै लगे ।
तेस्रो दिनमा, श्रीमान्को वास्ता दिएर कुनै महिलाले खाना खुवाइन् मलाई । धेरै दिनपछि पेटमा अन्न परेकाले होला नशा लागेजस्तो जीउ झुम्रो भयो र निद्राले च्याप्न थाल्यो । अगिल्लो राती झैँ मैले ओढेको मजेत्रो स्वात्त तानियो । झसङ्गै तर्सेर उठेँ । बिजुली बत्ती बलेकै थियो । तीन–चार जना अरू पनि सुतेकै थिए । मलाई निद्राले च्यापेकै थियो । मजेत्रो तानेँ । ओढेँ र फेरि सुतेँ । फेरि मेरो मजेत्रो स्वात्तै खिचियो । जुरुक्कै उठेँ । कालो छाया वरपर गरे झैँ लाग्यो । “मेरा चन्दन !” त्यही छायालाई आँखामा समेटेँ र सुतेँ । निदाउने बित्तिकै सपनामा तिनै जादुगरहरू आए । अगिल्लो दिनजस्तै बाजा बजाउन थाले । म लट्ठिँदै गइरहेकी थिएँ र ती जे भन्छन्, त्यही मान्दै थिएँ ।
“नाइँ ! रारा नाइँ ! यिनलाई केही नदेऊ ? तिमी भाग । यी कसाइँहरूले तिमीलाई पनि विनासित्तै काट्दै सिलाउँदै गर्ने छन् !” श्रीमान् चिच्च्याएर हात हल्लाउँदै आउनुभयो । ती कसाइँहरूले उहाँलाई तुरुन्तै आफ्नो कब्जामा लगिहाले । उहाँलाई छोडेर म कहाँ भाग्न सक्थेँ र !
चौथो दिन, आज थप केही हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो । चाहन्थेँ पनि ! सायद यो नाटकको छिट्टै अन्त्य चाहन्थेँ म, तर दिन आफ्नै हिसाबले चिप्लिँदै गयो र छिट्टै पर्यो रात । म कुनै नयाँको प्रतीक्षामै झोक्राइरहेकी थिएँ । मलाई निद्रा परिरहेको थिएन । सपनामा पो केही हुन्थ्यो कि ! सायद केही दिनदेखि म सपना देख्नकै लागि त निदाउँथेँ । चिन्ताले झन् पिरोलिँदै थिएँ । अकस्मात हल्लाखल्ला मच्चियो ! कर्मचारीहरूको दौडधुप हुन थाल्यो । गाइँगुइँ सुरु भयो । “कोही लिफ्टमा फँसे रे ! कोही भूतदेखि तर्से रे ! कसैलाई भूतले हिर्कायो रे !” यस्तो सुन्दा मेरो जीउमा जोस जाग्यो ! उठेँ र अप्रेसन रुमसम्म पुगेँ । बन्द थियो । फर्केर वेटिङ् रुममै आउँदा भुतुक्कै थाकेछु, निदाएँ । सपनामा ती जादुगर पनि आएनन् र मेरा श्रीमान् पनि भाग रारा भाग भन्दै आउनु भएन । सपना देख्नेको र सपनामा आउनेको संयोग मिल्नु पर्ने हो कि ! म सपनामै तिनलाई खोज्न निस्केँ ! जादुगर र जादुगर्नीहरू पिँजराको वरिपरि झुम्मिएका थिए । तिनका गुरूहरू पिँजरामा थुनिएका थिए ! त्यो पिँजरा मेरा श्रीमान्ले निकै गाह्रो गरी झुण्ड्याइरहनु भएको थियो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो,“अँझै बाहुन खोज्न जाने ? अब नाङ्गिने पालो तिमीहरूको हो ।”
त्यो पिँजराको डोरीले काटेर मेरा श्रीमान्का हातबाट मासु झर्दै थियो । त्यो दर्दनाक दृश्यले मेरो मुटु भक्कानिएर आयो । ती जादुगर भनाउँदा कसाइँहरूको व्यवहारले मलाई छिटै श्रीमान्को सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
बुबा ! यो अस्पतालका कसाइँहरूले मेरा श्रीमान्लाई मारेर पनि मसँग औषधी मगाउँथे । औषधीको एउटा पोको बनाई राखेका थिए । म औषधी पसलबाट त्यो पोको अप्रेसन रुमको गेटमा पुर्याउँथेँ, त्यो पोको फेरि औषधी पसलमै पुर्याइहाल्दा रहेछन् । फेरि मसँग मगाउँथे । पसले त्यही पोको र पचास हजारको बिल दिन्थ्यो । प्रत्येक दिन मेरो खल्तीमा एक–दुइटा बिल जम्मा हुँदै जान्थे । मेरा श्रीमान्लाई पनि थाहा छ । अस्पतालको बक्यौता तिरेर हाम्रो लास जलाउने काम नगर्नु होला । अब हामी यो अस्पताल छोड्दैनौँ !” … …रारा ।
अन्ततः पर्वत पहाडीले भने, “उजुरी दिउँ भन्या सपनाकन प्रमाण मान्न्या हुइनन्, चार लाख तिरिकन काँ लैजाऊँ यी लास ? आर्यघाटमा पोल्नलाई पनि पैसै चाइन्या हुनन् ! मृतकको इच्छा पनि यै अस्पतालै बस्न्या रहेछ ! डाक्टरौ ज्या अद्याछौ अर !” आँखैभरि आँशु समेत गाउँलेहरूसँगै गाउँ फर्के पर्वत पहाडी ।
अस्पतालमा चन्दन र राराको आत्माको रजाइँ बढ्दै गयो । त्यहाँका कर्मचारीहरू कोही भागे त कोही तिनकै सिकार भए । अन्ततोगत्वा अस्पताल पूरै खण्डहरमा परिणत भयो । अब त्यस अस्पतालमा रातीराती तिनै आत्माको थ्रिल्लर चलिरहेको सुनिन्छ ।
…खोजखोजखोजखोज … खाउँला, खोजखोज खोजखोज, खाउँला…. डाक्टरहरू काँ लुके …? ऊ… हु हु…, खोजखोज खोजखोज… खाउँला, खोजखोज खोजखोज, खाउँला… । डाक्टरहरू … ऊ… हुहु…।
(कथाकार थापा पछिल्लो कृति जङ्गेको डायरी (उपन्यास) र शिर्षकसँग सरिता (कथा सङ्ग्रह) का लेखक हुन् ।)